On1.click | မြေလူးငှက်လည်မဲ
... ာက်ပိုင်း၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား အနောက်ပိုင်းတို့တွင် သားပေါက်လေ့ရှိပြီး အရ...
Female in Uttarakhand, India
မြေလူးငှက်လည်မဲ (Turdus atrogularis) သည် မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား အနောက်ပိုင်းတို့တွင် သားပေါက်လေ့ရှိပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ အာရေဗီယန် ကျွန်းဆွယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် ဆောင်းခိုလေ့ရှိသည်။ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်တို့တွင် တခါတရံ တွေ့ရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International. 2017. Turdus atrogularis. (amended version published in 2016) The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22736108A119726457. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T22736108A119726457.en. Downloaded on 29 December 2017.